Madaxw. Burundi ku qoslaya marku ciidamo Burundi Somalia keenay, lakiin ku dhaartay:
haddii ciidamo dalalka Afrika Burundi la keeno, inuu dagaal ay ku hoobtaan kala hortagayo
iyo Midowga Afrika iyo QM yiraahdeen Ciidamada Burundi ha nabadeeyaan Soomaaliya, ciidamada Midowga Afrikana ha nabadeeyaan Burundi!
Sawirkan waa sidii Afrika Dagaalkii Kowaad Dunida (World War ONE) ahayd, Gumeysigii Yurubna ku qaybsaday Afrika (Partition of Africa). Xiligii dagaalkii Kowaad Dunida 1914-1918 socday ayaa Igiriisku kula heshiiyay Talyaaniga, hadduu dagaalka ka baxo inu siinayo Dhulka Soomaalida ee Jubbooyinka ee uu gumeysto nuskood. Kolki Talyanigu ka baxay dagaalka Ingiriisku wuu sharfay balanqaadkiisi. Dhulkii Soomaalida NFD sidaa bay Ingiriiska ugu haray, Nuskii kale Jubbooyina Talyaanigaa la wareegay uu ku darsaday dhulkii Soomaalida kalee uu gumeysanayay. Kiinya iminka waxay ku hamiweyntahay maadaama 1914 Jubboyinku Soomaalida Ingiriisku gumeysanayay (British East Africa), armaad Obama kuu ogalaadaa 2016 inaad Jubbooyinka dagaal ku qabsatid, ilaa ciidan Soomaaliyoo maanta daafacaya majiree. Maadaama Soomaalidu yihiin dad war ku nool ah, sanadka 2016 waxaa lagu mashquulindoonaa doorasho beeneed.
Yaasiinka Yaasiinka Yaasiinka! Hadii madowgii boqol sano ka hor sida xoolihii loo iibsanjiray ay maanta dadka iyo dhuklii Hooyo Soomaaliyeed sidan u gumeysanayaan.
Waxaa yaab ah ciidamada Midowga Afrika ee Madaxweynaha Burundi leeyahay haddi Burundi la keeno waa la dirirayaa sow kuwa ciidamada AMISOM Burundi uu Soomaaliya u soo dirtay iyagu kama mid aha ciidamo Midowga Afrika? Mise wax kaloo Soomaalida laga qarinayaa jira? Cuqubadan waxay la mid tahay Qaaramada Midoobay dalalka Asia ka dalbata Ciraaq iney Ciidamo nabadeeya dalka Afgaanistan u dirto, islamarkaan weydiisata dalalka Asia iney u diraan ciidamo nabadeeya wadanka Ciraaq.
Qoromadan Qaranka waxaan ku eegeynaa waxa ama sida uu u shaqeeyo Golaha Amniga iyo sababaha keentay inuu Golaha Amniga u diido Soomaalidu iney dal xor ah sida dowladaha kale Q.M. noqdaan. Laga soo bilaabo 1991 dowladii KM ee Cali Mahdi ee Jabuuti QM Soomaalida ugu soo dhiseeen, ilaa hadana sidaas dhowrkii sanaba dowlad magac cusub wadata oo aan shaqeynayn Soomaalida u soo dhisaan.
Madaxweynaha dalka Ugaandha Museveni baa mar yiri: Soomaaliya waxay noqotay Labaratoorka Guinea-Pigs oo Q.M. ku sheybaarto musiibooyina dal ku dhici kara.
Qaarada Afrika dalal 50 ka badan baa ku yaala. Soomaaliyey FAKARA! Maxaa labo dal Burundi iyo Ugaandha oo Kenya la wadaaga Ururka Afrikada Bari (The East African Community) (EAC) ciidamadooda kaliya AMISOM Soomaaliya loo keenay?, oo ciidamada 48 dale Afrikada kale loo keeni waayay?
Xataa Ururkan (The East African Community) (EAC) sida EU-da ayeey Barlamaan leeyihiin, sanadka 2017 rabaan sida EU-da iney hal lacag Sameeystaan:
East African Assembly Partner States of Uganda, Kenya, and Tanzania; Burundi and Rwanda acceded to the Treaty on 18th June 2007.
Af-Soomaali erayadan Ingiriiska ee Barlamaanka Ururka Afrikada Galbeed qoray waa: Barlamaankan Ururkan Afrika ee Uganda, Kenya, iyo Tanzania; oo Burundi iyo Rwandana 2007 ku soo biireen.
Soomaali badan ayaa rumeysan in ciidamo Burundi iyo Ugaandha Soomaaliya joogaan. Runto waxay tahay wax ciidamo Burundi ama Ugaandheesa oo Soomaaliya jooga ma jiraan.
Sida sawirka dusha sare muujinayay dalalka hada Uganda iyo Kiinya lagu magacaabo ila 1963 waxaa lagu magacaabi jiray British East Africa, bal markale dib u fiiri sawirka dusha, Markii Ingiriisku 1963 xuriyada siinayay ayaa British East Africa labo dal oo xor ah noqdeen: Uganda iyo Kiinya. Kolki Ingiriisku xuriyada siinayay xukunka wuxuu u dhiibtay qabiiladii kolkaas si fiican ula shaqeeynayay oo ilaa hadda labadaas dal xukuma.
Arintan waxay noo cadeeyneeysaa Ciidamada UGAANDHA AMISOM la leeyahay iney runtii yihiin CIIDAMADA KIINYA oo shaati kale loo soo galiyay. Haddii aan arrintan ka fiirino dhinac kale, haddii dhalinyarada Soomaalida ee Soomaali Galbeed, marki Soomaaliya yimaadaan ciidamo loo qorto waa ciidamo Soomaaliya, marki Adisababa aadaan oo Amxaaradu ciidamo u qoratana, ilaa waa Galinka 5-aad ee Itoobiye waxaa lagu magacaabaa iney yihiin ciidamo Itoobiyaana.
Sidoo kale, Burundi, Rwanda iyo Ugaandha markaad fiiriso taariikhdooda waa dad aan Hitler wax weyn saas uga duwaneyn markaad taariikhdooda fiirisid: Huti Tutsi Genocide, Jabhada ciidamada LORDS ARMY iwm., xitaa xulfadeysi Genocide baa ka dhaxeeya saddexda dal.
Kolkii 1986 Museveni xukunka dagaal kaga qabsanayay kuxihii xukunka kula tartamayay ee aad hubeeysnaay waxaa, garab siiyay qabiilka taariikh ahaan Burundi iyo Rwanda xukumi jiray ee Tutsi la yiraa. Marka maadaama Mareykan 49 dowladood oo Afrikaan muddo labo sano ay ka diideen iney AMISOM Somalia u soo diraan, oo Ciidamada Ugaandha kaliya la orananayay AMISOM, ayaa Museveni iyo Mareykan ilaahey u soo baxshay Tutsiga oo waligood ciidamada Burundi iyo Rwanda u tali jiray.
Marka askarta AMISOM ee Ugaandha waa askartii British East Africa ama ciidamo Ugaandha ama ciidamo Kiinya ha lagu magacaabo tii la doonee.
Madaxweynaha Burundi oo xukunka inuu ku dhago jeclaystay waxaa lagu waaniyay hadduu Jeneraalada Tutsiga Soomaaliya u diro oo Qoysaskooda Bujumbura guryo raaxaa ka iibsadaan Bujumbuura inaanan Inqilaab Militari ama Genocide ku sameeynayaan. Fikradaas Madaweynaha Burundi oo qabiilka Hutsi ah muddo way u shaqeeyneysay, ilaa sanadkii hore cudurki dhowrki sanaba mar ku dhici jiray Burundi Genocide-ka ayaa isagoo bilow ah ka dhex dilaacay Tutsiga iyo Hutsiga Burundi.
Maadaama Madaxweynaha Ugaandha Museveni uu aad ugu dhowyahay qabiilka Tutsiga ee hadda lagu bilaabay in Burundi lagu ugaarsadoo iyagoo lagu eedeynayo askartooda Inqilaab iyo iney rabaan iney xukunka Hutsiga kala wareegaan. Waana sababtaas maanta uu Museveni ugu olaleeynayo Ciidamo Midowga Afika Burundi lageeyo.
Halkan waxaa kuu cad inuu Madaxweynaha Burundi ku fakaray haddii Jeneraaladiisa Tutsiga ay ku biiraan kuwa Ugaandha hadda xukuma Museveni xukunka ku waari karo.
Marka ciidamada maanta lagu magacaabo Burundi ee AMISOM Soomaaliya jooga waa kuwii Ugaandheeska iyo Kiinyaatiga oo shaati kale loo soo galiyay
Sababta ciidamada Burundi iyo Ugaandha hordhac looga dhiga intaanan ciidamada Itoobiya iyo Kiinya la keenin waa si aan Soomaalidu u arkin in dhulkoodi Hooyo cadowgoodi soojireenka uu gumeysi ku qabsaday oo aysan u kacdoomin.
Waligiin ma maqasheen ciidamada Xabashida iyo kuwa Ugaandha ee Soomaaliya joogaa isku dhacay oo isqilaafay? Ama Kuwa Burundi iyo kuwa Kiinya ka murmay dagaalka Soomaaliya ay ka wadaan.
Ma jirto maalin aysan labo carruur oo walaalo ah wax iska wax isku qabsan ama ku murmin, iskaba daa afar dal oo ciidamadoodu dal aysan aqoon ka dhex dagaalamayaan.
Caalamku markuu magaca Burundi maqlo, nabad iska daaye waxaa lagu xasuustaa in labada qabiil oo ay ka kooban yihiin Tutsi iyo Hutsi dhowrki sano kasta Genocide Sokeeye ka dhaco.
Events in 1973 and 1993 are considered to constitute genocide, where an estimated million people, mostly civilians have been killed. SOS Children, an NGO, uses AIDS testing and Sample testing had shown that those who were HIV positive were 20 percent. Wikepedia.org
�Rwanda and Uganda fought a short war in Congolese territory. ... by 2008, the war and its aftermath had caused 5.4 million deaths.�Wikepedia.org
Sida Wikepedia qorayo dalka Burundi Genocide-yadii 1973 iyo 1993 Hal Milyan dadaa lagu dilay. Shacabka Burundina 20% waxay qabaan cudurka AIDS-ka. Qoramada hoosana waxaa jornaalku leeyahay Rwanda iyo Ugaandha dagaaladi ay Congo ka kiciyeen waxaa ku dhintay dad reer Congo oo 5.4 milyana.
Hadaba sideey ku go�aansatay Golaha Amniga ee QM siduu ku gaaray in ciidamo ka socda dalalka Burundi iyo Ugaandha oo waxaan Genocide ahayn lagu aqoon Soomaaliya u soo diro?
Taariikhda Golaha Amniga ee QM
QM waxaa ka horeeyay urur la dhihi jiray (League of Nations) (LoN), kaaso la sameeyay markii uu dhamaaday Dagaalkii Dunida ee Kowaad World War ONE.
When during the Second Italo-Abyssinian War, the League accused Benito Mussolini's soldiers of targeting Red Cross medical tents, Mussolini responded that Ethiopians were not fully human, therefore the human rights laws did not apply.
"The League is very well when sparrows shout, but no good at all when eagles fall out.�
Af-Soomaali erayadan Ingiriisku dusha ku qoran oo uu qoray wargeyska http://www.rarenewspapers.com/view/559820, sadarka dhibacda koowaad waa:
Kolkii dowladihii Allies-ka ee Ingiriiska, Fransiiska ku edeeyeen Talyaaniga oo Jarmalka ku xulfa ahaa (Axis) inuu duulaanki Talyaanigu Abeesiinya(Itoobiya) uu ku duulay inuu si bareera u xasuuqay shaqaale ka mid ahaa Hay'ada Samafalka Bani'aadanka, ayaa Mussolini ugu jawaabay xulfada Allies-ka sidatan:
ITOOBIYAANKU MAAHAN DAD DHAN oo BANI'AADANA ah, SIDAAS AWGEED SHARCIGA BANI'AADANA TALYAANIGU WAXBA UMA GEEYSAN.
Sadarka labaad ee Musselini ku jawaabay macnihiisu waa sidatan:
Uruka Dunida aad buu nabad u yahay haddii Sparrows (Sparrows waxaa la yiraa shimbiraha yaryaroo laamaha geedaha dhexdooda ku bood booda, laakiin uu halkan Musseliini ula jeedo iney Itoobiyaanka uu u arko Itoobiyaanka sida Shimbirahaas oo kale oo aa Bani�aadan lagu sifeeyn karin, sidaas awgeedna aan Talyaanigu jabin sharciga Bani'aadanka ee Ururka Caalamka u dhigan) qeyliyaan, laakiin hadii Galeyrka (dadka Bani�aadanka ayuu ula jeedaa Musselini) dhulka lagu soo rido ama la dilo, Ururku haba yaraatee, wax anfacaada oo uu leeyahay aysan jirin.�
Doodaan iyo fidnooyin kale oo dhinaca Jarmalka ka yimid ayuu ku baaba�ay Ururkaas Caalamka.
Hase ahaatee, Dagaalkii Labaad markuu dhamaaday saddexdii dowladood oo ku guuleysatay Mareykan, Ingiriis iyo Ruushka ayaa dib usoo nooleeyay Ururki una bixiyay magac cusub: QM (United Nations).
Saddexdan dal waxay ururka u sheegeen in maadaama iyoagu Hubka Niyuklaarka haystaan xaq u leeyihiin iney Golaha Amniga ee QM garwadeen ka noqdaan iyaga kaliyna isticmaalaan awood QAADICADA ee Veto loo yaqaan. Isku soo duub iyaga ah Maxkamadi Caalamku.
Hase yeeshee si aan culeys uga imaan Caalamka oo loo dhihin cadaalad maahan inaad dunidoo dhan saddexdiina dal kaliya xukuntaan, ayaa Mareykan iyo Ingiriis, saaxiibkoodi dunida ugu dhawaa Fransiisku bay hubka Niyuklarka iuu sameeysto ka caawiyeen, Ruuskuna saxiibkii Shuuciga Shiinaha hubka Niyuklarka iuu sameeysto ka caawiyay.
Hadaba sideey 5-tan dal ee Golaha Amniga QM taliya ku Amreen iney Ugaandha iyo Burundi oo ay QM Genocide iyo Heyadaha Bani�aadankana ku eedeeyeen ineey xasuuqeen oo laayeen shacab 6.4 Milyan ah oo u badan Jamhuuriyada Dimoqoraadiga ee Congo?
Waana maxay sababta keentay dalalka Golaha Amniga ee codka Veto-da-leh:
Ruushka, Shiinaha, iyo Mareykan iyo labadiisa xulfo Ingiriis iyo Fransiska 25-ki sano ilaa hadana ugu codeynayaan iney Soomaaliya AMISOM ilaaliyaan oo aan loo ogalaan Soomaalidu iney dal xor ah noqdaan oo ciidamo Soomaaliya dhistaan?
Amxaarada iyo Kiinyaatigu mar walba waxay ku andacoodaan inaan dowlada Turkiga iyo Masar tababari karin ciidamo Soomaaliya, maadaama Golaha Amniga u dhiibay AMISOM tababarida ciidamada iyo ilaalinta dowlada.
Runtii lama dhihi karo Shiinaha iyo Ruushka waxay 25-ki ugu codeynayeen ama u taageereen Mareykan iyo labadiisa xulfo Ingiriis iyo Fransiska 25-ki sano, iyo ilaa hada Soomaaliya ansixinta dowlado Soomaaliya oo amnigeeda ciidamo shisheeye ilaaliyaan, dhibka dalkana iney sii huriyaan maahane aan Soomaalida waxba u qabin, maxaa yeelay Soomaalida ayey dana gaar ah ka leeyihiin ama aysan jeclayn.
Sirdoonka Shiinaha iyo Ruushka iyo shirarka Soomaalida dowlad loogu sameynayay ka qayb galayay waxay gudbiyeen in hogaamiyayaasha Soomaalida aysan dad mada� leh ahayn.
Safaaradaha labadan dowladood oo taageradooda Golaha Amniga maanta Soomaalidu aad ugu baahan tahay, markay arkeen hogaamiyo kooxeedkii shirka Soomaalida oo saf ugu jira lacag yaro dowlado ku yaboohayaan, ayeey arkeen inaan dadka Soomaalida dowlad la taageri karo lahayn.
Xiligii dagaalkii Fiyetnaan iyo Mareykan socday ayaa waxay labada dal Shir joojinta dagaalka oo Paris wafuud u soo dirteen. Subixii labada wafuud qolkii shirka soo galeen ayaa waxaa laysku qabsaday kuraasti fadhiga Shirka: dhinacaan bidixda fariista anaguna dhinaca midigtaan fariisan.
Wafuuda Mareykan ee daganaa Hoteel qaaliya dhowr usbuuc marki arintan laysku afgaran waayay dalkoodi bay ku laabteen inta xal la helayo. Wafuuda Fiyetnaam marki horeba guri ayey ijaarteen.
Siyaasiyiinta dal hogaaminaya hadeysan Mabda� aysan lahayn, dalkooda dowladaha quwada leh iney si daacada u taageeraan way adagtahaty.
Yaa u quuri kara codkiisa QAALIGA ee Adduunkoo dhan 5 dowlo kaliya haysato Quwada Qaadicaada (Veto Power) dal ay siyaasadiisu hogaamiyaan siyaasiinaan xitaa Hoteelada tujaarta yar yar ee alaabaha darsin darsinka lagu iibiyo markeey dibada ka soo iibsanayaan ay seexdaan, kana cunteeyaan, aanan awoodin iney seexdaan ama ka cunteeyaan, oo dowlado shisheeye leh inaga bixiya hoteelka, raashikiina waa nala ka goostay!
Arintu si kastaba ha ahaatee, dhamaadka sanadkan 2016 Golaha Amniga wuxuu isku diyaarinaya sameynta ama sharciyeynta iyo taageerada doorashada dowlada Soomaaliyeed, oo uu dhihi doono Caalamku waa inuu taageero dowlada iyo Madaweynaha cusub ee Soomaaliya ee Barlamaan Goboleeyadyo ay iItoobiya iyo Kiinya Soomaaliya u dhiseen soo doorteen.
Dadka Soomaaliyeed waa iney aad iyo aad uga digtoonaadaan xiliga Soomaalidu ku mashquulsantahay doorashada ama Caalamku ku mushquulinayo doorasho beena, si ay ugu suurtowdo Kiinya intey dhowr askari iska disho si ay u tiraa ciidamo Soomaaliyaa ama Al Shabaab baa saaka nagu soo duulay, anaguna isdifaac ayaan Soomaaliya ugu duulnay oo dagaalkii Jubbooyinka ciidamada Soomaaliya waan uga guleeysanay, iyadoo isleh ka fa�iideyso qalalaaska Soomaaliya dowlad la�aanta xiliga doorashada (Power Vacuum) iyo intaanan Obama xukunka ka degin oo sanadkana.
Kolkaas Golaha Amniga ee QM digniin (Resolution) buu dalalka Soomaaliya iyo Kiinya u soo diri doonaa in dagaalka si deg deg ah lagu joojiyo, dhulka Jubbooyinka ee Kiinya iyo Soomaaliya isku haystaan wada xaajood lagu dhameeyo.
Itoobiyana iyaduna Bun cabimayso oo dhinaca Baidoa bay dhow askar iyaduna iska dilidoontaa si ay ku qabsato gobolka Koonfur Galbeed.
Kolkaasna waxaa iqarso noqodoona Digniintii Soomaalida uu uga digay Danjire Maxamed Cusman Cumar KA FIKIR: SOOMAALIYA OO LA HOOS GELIYA WASAAYADDA IGAD 2016?
Bal fiiraya labadii goor oo Itoobiya iyo Kiinya
Soomaaliya ku soo duuleen oo gumeysi ku qabsadeen 200 6 iyo 2011waxay ahayd xili doorasho Madaxweyne lagu mashquulsanaa ama dowladii cusbooneed Muqdishu loo soo raro:
Amxaaradu xili dowladi cusboonayd ee Cabdulaahi Yuusuf Muqdishu loo soo rarayay bay Itoobiya ku soo duushay Soomaaliya oo ay gumeysi ku qabsatay.
Kiinyana xiligii dowladan Xasan Shiikh la dooranayay bay Jubbooyinka iyo Kismaayo ku soo duushay oo ay gumeysi ku qabsatay.
Si Soomaalida looga indha sarcaadiyo Soomaalida gumeysiga Amxaarada iyo Kiinya ee dalkooda qabsaday, ayaa sidii 25-ki sano dowladihi tan ka horeeyay lagu sameeyn jiray kuwa ay ka mid yihiin ayaa Soomaalida iyo Madaweynaha cusub DACAAYADO raqiisa looga mashquulidoonaa sida Safaro dibada oo aan Soomaalida dhib mooye wax kale aysan ka heleynin, sidii dowladihi horeba loogu mashquuli jiray.
Waxaa 100% la hubaa iney taasu dhacayso maadaama muddo Rubuc Qarni ka badan ay dhowrki sanaba marki shacabku ka ashahaato dhibaatada dowlad beeneedka QM Soomaalida u sameeyeen, ay mid cusub oo magac cusub wadata ugu soo dhisayeen Soomaalida.
Nasiib wanaag sidii ABWAAN SANGUB iyo Soomaali badan maalmahabn ku baaqayeen, inuu dalku gumeysi ugu gacan galay Amxaarada iyo Kiinya oo XABASHIDA, "QM", iyo KIINYA dhamaadka sanadkan sida caadadu u ahayd soo dhisaan dowlaad Soomaaliya:
waa iney Soomaalidu KACDOON sameeyaan oo dalkooda gumeysiga madow Xabashida Kiinya DHULKOODA HOOYO hodanka ah ka xoreeystaan.
ISKUSOO DUUB: haddii dalka aysan Amxaaro iyo Kiinya goosan, labo ama 4 sano kadib waxaa Soomaalida sugaya ku soo celcelinta muddo 25-sano ka badan DACAAYADAHA RAQIISKA ah ee qaarkood hoos ku qoranyihiin, -sida Soomaalida oo dhan hadda wada fahmeen:
Bisha soo socato 17 September 2016 waxaa Madaweynaha cusub ee Soomaaliya u safrayaa dalka Mareykanka si uu uga qayb galo shirka weyn QM ee New York dabayaaqada bisha lagu qabandoono.
Maanta waxaa Madaweynaha cusub ee Soomaaliya uu qado sharaf u sameeyay Xildhibaanada Barlamaanka Soomaaliya.
Gaari Taanki oo ahaa nuuca aan miinadu karin oo ciidamada Ugaandha wateen ayaa saaka wiil yaro Soomaaliya ku jiiray xaafada wardhiigleey, meydkiisana jidka uga cararay.
17 December 2016 waxaa Madaweynaha Soomaaliya u duulidoona magaalada Brussel si uu uga qayb qaato shirka EU �da ee Brussel ka dhacaya oo Soomaalida lacag yabooh 300 boqol oo Milyan Euro loogu aruuridoono.
Dabadeedna Adisababa Itoobiya buu soo maridoonaa si dhigiisa Itoobiya uu ugala hadlo sii xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dal ee WALAALAHA ah ee saxiibtinimada gaarka ah ka dhexeeyso, si ay u sii xoogin lahaayeen iskagashiga la dagaalanka Al Shabaab kula jiraan, (waxaa yaab leh haddi Mareykan uu Talibaan oo dalkoodi ku tababaray Al Qacida 9/11 oo daqiiqado iyagoo nool ku gubeen har cad Caalamka oo fiirsanaya caasimada dhaqaalaha Mareykan New York Shacab Mareykan 3.000 kun qof dhaafay, uu hadda miis kula hor fariistay, si ay heshiis nabadeed Talibaan ula gaaraan, islamarkaas Mareykan leeyahay Al Shabaab nabada Geeska Afrika iyo dunida ayeey qatar ku yihiin, waana iney dunidu cirib tirto oo la babi'yo.) ARRINTAN waxay kuu CADEEYNEYSAA inaan DAGAALKA SOOMAALIYA ka SOCDA wax SHAQAA oo ARGAGIXO la DIRIR uu ku LEEYAHAY AYSAN JIRIN, ee SOOMAALIYA DANO GAAR ah ayaa LAGA LEEYAHAY.
Bisha September 2016 waxaa Madaxweynaha Soomaaliya safar u aadi doona Carabta Qatar, Sacuudiga iyo Imaaraadka si Soomaalidu garab uga siiyaan ku soo celinta dalka Soomaaliya nabad waarta ( is weydii marka hore, Maanta Carabu iyudu nabad maheysataa, middal kale haddii Carabu kolkii ay nabada haysatay Soomaaliya wax u qaban, maanta oo barakac iyo kala faniin haysato Soomaaliya wax ma qaban?)
Saakana waxaa Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya uu xaafiiskiisa kula shiray Safiirka Norway Soomaaliya u fadhiya. Waxuuna Safiirku ka balan qaaday madaweynaha in Norway ay ka dhantahay iney taageero u fidiso Soomaaliya.
Ra�iisul wazaaraha cusub ayaa dhowr iyo labaatan waziir iyo dhor waziiro ku xigeen soo magacaabay Barlamaankuna waa ansixiyay.
Magaalada Muqdishu ayaa maanta Shirkad Norway leedahay ayaa dowlada Soomaaliya heshiis shidaal baaris la gashay, shirkadaasu badda Kiinya shidaal ka baarta, saldhigeeduna yahay magaalada Nairobi.
Ciidamada AMISOM ee Ugaandha waxay sheegeen inaan muddo 6 bilooda mushaar aan la siinin (sheeko Soomaalida lagu maamwelinayo, si aan loo dhihin ciidamada Soomaalida ee ka barbar dagaalamaya mushaar ma qaataan, kuwa Ugaandheeskana askari kasta 1.000 doolar baa bil kasta la siiyaa, waxaa taa ka sii daran saxaafada Soomaalida daqiiqado bay ku faafin hadalkaas dacaayada ah.)
Xiligii lagu jiray dukashada salaadii subaxa ayaa mar qura Muqdisho Qarax xoogan ay saaka aruurtii ka dhacay Hotel Hebel laga maqlay. Al Shabaab ayaana qaraxaas sheegatay. Labo xildhibaana wey ku geeriyootay qaraxaas, Saddexna dhaawac fudud ayaa soo gaaray. Markiiba ciidamada Burundi ayaa soo gaaray oo nabad ku soo celiyay goobti qaraxa ka dhacay, sidaas waxaa yiri waziirka arimaha gudaha. Madaweynaha Soomaaliyana wuxuu tacsi u diray reerihii xildhibaanadu ka geeriyoodeen.
500 boqol oo ciidamo Itoobiyaana ayaa xadka Soomaaliya dhanka Feer Feer ka soo galay oo Beletweyne soo gaaray maanta, markeey baaritaan magaalada ku sameeyeen waxay kaxeeysteen cuqaal, odayaal iyo arday Soomaaliyeed,(arrintan sow beeni mayso kolki wargeys Reer Galbeed ku daray Xasan Shiikh 100-ka Madaxweyne Adduunka ugu quwad weyn. Haddi dacayadan runtahay miyaa la dhihi lahaa Amxaaraa xuduudka Soomaalida soo gashoo kaxeystay cuqaal, odayaal iyo arday Soomaaliyeed ama Kiinya God 700 mitir ka qaday dhulka Soomaaliya si ay Soomaalida dhul uga goosato).
Hay'ada Qaramada Midoobay u qaabilsan Xanaanada Arimaha Bani'aadamnimada (OCHA) waxay ka digtay abaar xun oo Soomaaliya ka jirta, waxayna deg deg caalamka uga codsatay cawinaad la soo gaarsiiyo .
Labo qabiil ayaa Tuulo fulaan maanta isku diriray, 15 ruux bay dagaalkaas iskaga dileen. Madaweynuhu wuxuu codsaday deg deg dagaalka lagu joojiyo. Waxa Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Shiekh Hebel wuxuu yiri, "Dadka Soomaalida dagaal way ku daaleen, maanta nabad bay u baahanyihiin."
Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowlada Soomaaliya ayaa maanta Baardheere kala wareegay Al Shabaab 19 argagixisada dagaalka uga dilay.
Ergeyga Gaarka ah ee Xogheyaha Guud ee qaramada midoobey kulan uu xalay la yeeshay Barlamaanka wuxuu ku yiri, Soomaaliya way ka baxday dalalka burburay oo Madaxweyne Dimoqoradiya bay iminkaq dooratay. Waxaa kalo Mudane Keating sheegay in Al Shabaab ku biirtay ururka Daacish (IS) sidaas darteedna loo baahanyahay caalamku ciidamada AMISOM xoojiyo oo Helikobtaro dagaal soo gaarsiiyo, si ay ula diriraan Daacis oo Soomaaliya ku sii fidiya.
Muran ka dhexeeya Madaxweynaha, Xildhibaanada iyo RW-ha ayaa cirka isku shareeray, kolkii RW soo magacaabay Waziir FULAAN iyo markii ay xumaatay dood baryahaanba dhex tiil dowlada kuna saabsanayd dhaqan gelinta Xeerka Lambarkiisa 34 oo qoraya in Goboladu horkeenaan Barlamaanka intaanan Madaweyne dowlad Goboleedyado la heshiin shirkadaha shisheeye.
Doon ay dhalinyaro 200 tahriibayaal Soomaaliya saarnaayeen ayaa badda Liibiya iyo Talyaaniga u dhexeeysa maanta ku rogmatay. Markab Talyaaniya ayaa wuxuu badbaadiyay 25 ruux oy ku jirtay gabar Soomaaliya oo labo cunug oo ay wadatay ku jireen kuwii badda ku dhintay. TV-ga Qaranka iyo idaacada BBC-da oo teloofanka khadka kula xiriiray ciidamada badda ee Talyaaniga ee Jaziirada Lambadusa ayaa xaqiijiyeen shilkan, iyadoo BBC-du tiri Poliizka Talyaaniga ayaa doonaya iney ugaadaan inuu ku jiray Ninkii doonta waday 25-ti qof ee badbaaday.
Muranka soo kala dhex galay Madaweynaha iyo RW, wuxuu horseedi karaa in dowladu burburto; Itoobiya ayaa RW saaka u yeertay, qilaafka dowlada Soomaaliya waxaa la filayaa inuu iminka dhamaaday.
Ciidamada Kiinya ay shalay ku laayay dad shacab ah tuulo ku taal Jubbooyinja ii 60 kilomitir u jirta magaalada Kismaayo. Dad goob joog ahaa ayaa sheegay ciidamad Kiinya ka bilaabeen dhismo noqonaya Xad hadda kadib u dhexeeydoona Soomaaliya iyo Kiinya.
Golaha Amniga ee QM shirkooda maanta arrimaha Soomaaliya ku saabsanaa bay gaareen Go�aan ay 6 bilood ugu kordhiyeen joogista ciidamada Midowga Afrika AMISOM.
Madaweynuhu wuxuu saakay xaafiiskiisa ku qaabilay kana gudoomay warqadihi aqoonsiga safiirka cusub ee Japan u soo magacawday Soomaaliya.
Doladaha ciidamada AMISOM: Itoobiya, Kiinya, Ugaandha iyo Burundina waxay balan qaadeen iney Ciidamo dheeraad ah u soo dirayaan Soomaaliya si ay Al Shabaab Soomaaliya uga cirib tiraan. (bal Soomaaliyey arka falkan haddii Midowga Afrika ciidamada AMISOM Soomaaliya u soo diray sow lama rabin iney iyagu marka hore soo laba rabin iney ku dhawaaqaan marka ciidamo Amisom Soomaaliya u soo dirayso?. maalin waliba waxaad maqleysaa Ugaandha ama Itoobiyaa yiri ciidamaan Soomaaliya u direynaa.)
Markab dowlada Iran leedahay ayaa burcadbadeed shalay ku af-duubeen badda Soomaaliya.
Daawo SAWIRADA Madaxweynaha Soomaaliya oo booqday magaalada Jowhar, heer sarana loogu soo dhaweeyay, furayana Airiboor cusub oo ah midka ugu casrisan qaarada Afrika oo dowlada Turkiga dhistay.
Xogeeyaha Guud ee QM Banki-Moon wuxuu Soomaaliya u soo magacaabay Ergey Cusub Smith Filip, oo dalka CANADA u dhashay, wuxuuna badalaya Ergeyga Keating. Smith wuxuu QM uga soo shaqeeyay Koonfur Suudaan, Ciraaq iyo Afgaanistaan. Maadaama dalalkaas howlo dhexdhexaadin muhiima QM uga soo qabtay, waxaa la filayaa inuu howlaha murugaysan ee Soomaaliya wax weyn ka badalo.
Dowlada Braziil ayaa tiri 4 maraakiib oo dagaalka ayaan u dirayaa Xeebaha Soomaaliya si ay uga qayb qaataan la dirirka Burcadbadeedka Soomaalida.
Wada hadaladi ka dhexeeyay dowlada Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa bisha April lagu wadaa iney dib uga furmaan dalka Turkiga.
Diyaaradaha DRONES-ka ee Mareykan ayaa xalay duqeeysay xaruun ay Daacish (IS) iyo xulfadooda Al Shabaab ku lahaayeen Jilib. Sida uu sheegay Mareykanku, duqeynta waxaa lagu dilay hogaamiyihi Al Shabaab ee Gobolka. Al Shabaab waxay dhawaan ku biireen kooxaha Daacish (IS).
Hay'adaha u dooda Xuquuqda Bani'aadanka ayaa yiri Ciidamada AMISOM iney TACADI GALMO IYO KUFSI u geeystaan Gabdhaha iyo Dumarka Soomaalida oo dagaalaadu barakiciyeen, kolki ay xeryahooda daawo iyo kaalmo u soo doontaan, maadaama muddo 30-sano wax dowlad ah oo kaalmeysa aysan haysan;
-(Taa waxaa kasii daran kuwii Soomaalidu u soo doorteen dowlad, meeshii ay Gabdhaha iyo Hooyooyinka Soomaalida dagaaladu daciifiyeen oo gaajeeysan ka cawini lahaayeen, waxay jiifaan oo qado 5 Goor la Dalbado (5 Meal Course) ku cunayaan Hoteelada 5 Xiddigo (5 Star Hotels) ee Muqdihu, iyadoo laga yaabo Gabdhaha iyo Hooyooyinka Soomaalida tuugsiga ugu tagaya Xerooyinka Ciidamada AMISOM aysan MAALIN ama LABO MAALIN wax raashina cunin).
Labo sano ama 4-sano kadibna waa FAANOOLE FARI KAMA QODNA:
QM waxay dowlada Soomaaliya kula talisay iney dowlad cusub oo dimoqoradiya, xiliga uu waqtiga dowladan 2020 dhamaado la soo dhiso. Ergeyga QM Soomaaliya u fadhiya Smith wuxuu dowlada u sheegay inaan wax waqti kordhis ah la siidoonin dowladan. Smith wuxuu yiri, inkastoo waqtigu u cariiri yahay, Shirka wadatashiga Gobolada dardar waa iney galiyaan si sanadka 2020 Soomaaliya uga dhacdo doorasho HAL QOF HAL COD.
HADDI SOOMAALIDU NASIIB LEEDAHAY oo aanay AMXAARADA iyo KIINYA GOBOLO SOOMAALIYA ka GOOSAN DHOWR GOBOL, oo sanadkan dhamaadkiisa 2016 DOWLAD BEENEED QM sidii kuwii ay 25-kii sano ina dhaafay, kolkii 2 sano ama 4 sano dadku ku daalo dowlad beeneedka ay DOWLAD 2 sano ama 4 sano ugu soo DHISEEYSAY SOOMAALIDA u soo DHISTO, UMMADDA SOOMAALIDA sida HOOS ku QORAN oo ah sidii 25-ti sano ku NOOLAAYEEN ama si kasii FOOLXUN ayeey ku NOOLAANDOONAAN, haddi aysan KACDOON SAMEYN oo aysan SAMATBIXIN DHULKOODA HOOYO oo MUSTAQBALKA SOOMAALIDA DAMBE ah.
kolkii QM dhamaadka sanadkin tiraahdo dowlada Soomaaliya hadda jirta labo sano ayaan waqtiga ugu kordhinay ama ku andacoota Xildhibaano ay Madaxweynayaal Goboleedyadii Soomaalida ay Amxaaro iyo Kiinyaatigu u soo magacaabeen jagadaas, baa maanta Madaxweyne SHIIKH HEBEL soo doortay, kolki uu wariigii saddexaad ku guuleeystay Mudane HEBEL, maadaama doorasho HAL QOF HAL COD Al Shabaab awgeed aysan dhici karin. (QM Ciraaq oo Ramaadi iyo Baqolaal Bam lagu qarxinayo oo xitaa Ergeygegi Gaarka QM bam lagu qarxiyay ayaa DHOW JEER doorasho HAL QOF HAL COD la QABTAY. Sidoo kale AFGAANISTAAN TALIBAAN oo meel walba QARXINEYSA ayaa DHOW JEER doorasho HAL QOF HAL COD la QABTAY. Ka FAKIRI RUBAC QARNI SANO SOOMAALIYA loo LEEYAHAY DOORASHO HAL QOF HAL COD AMNI XUMO AWGEED lama QABANKARO.)
GUNAANAD: Kolka dhamaadka sanadkan 2016 saxaafadaha TV-yada Caalamkuna shaaciyaan wararkan hoos ku qoran iwm:
Ummadda Soomaalidu aad iyo aad bay ugu FARXEEN doorashada cadaalada ee shacabku Soomaalida markii kowaad muddo 25 ku soo doorteen si Dimoqoradiyada Barlamaankooda iyo madaxweyne QM iyo Caalamkoo taageereen.
Madaweyne cusub HEBEL ee Soomaaliya Jaamicad India ama ... ayuu wax ku soo bartay, Hay'ad FULAAN ee QM labo sano ayuu ka soo shaqeeyay, waana inuu Caalamku kaalmeeyo dowlada Soomaalida ee TABARTA DARAN, si ummadda Soomaalida oo muddo dheer dowlad dhexe shaqeyneysa haysan horumar, nabad iyo barwaaqo u gaarsiido.
RUWAAYADAN Qaaramada Midoobay jilideeda sidii jaamacad ay ugu soo qalin jabisayay ugu dhigto Soomaalida, oo magaca un uga duwan kuwii 25-tii sano tagay ay Soomaalida u soo dhisayeen oo waxaan burbur ka ahayn laga helin.
Sidaas awgeed sida ABWAAN SANGUB iyo wax garad badoonoo Soomaaliya uga DIGEEN SOOMAALIDA inuu dhulka HOOYO gumeysi MADOW ku jiro, ayna waajib tahay ummadda Soomaaliyeed iney kacmaha isqabsadaan KACDOONA gumeysiga ku qaadaan, oo BANAAN BAXYO looga soo horjeedo diidmada gumeysiga Amxaarada iyo Kiinyaatiga inta goori goor tahay magaalo walba iyo degaan walba ka dhigaan, si mar qura Caalamku codkooda u maqlo.
Ayna ka DHABEEYAAN MAAHMAAHDA SOOMAALIYEED: DAWACO
MEESHEEY MACAL ugu DHARAGTAA MACALUUL ugu BAKHTIDAA.
Shirkii Soomaaliya ee Itoobiya, kiinya iyo Mareykan ku yeesheen Aqalka Cas, Washington.
Kolkii shirku dhamaaday war gaaban oo Bush saxaafada siiyay yiri:" Maanta Saddexdeena
dal waxaan isku raacnay inaan iska kaashano sidii Soomaaliya horumar iyo nabad waarta loo
gaarsii lahaa." Bil kadibna ciidamada Itoobiya oo Ciidamo Mareykan kalkaalinayaan ayaa
Soomaaliya gumeysi ku qabsaday. Afar sano kadibna ciidamada Kiinya oo Mareykan cirka
iyo badda ka gargaarayeen ayaa Jubbooyinka ku soo duulay oo gumeysi ku qabsaday.
DABAALDAGA IYO RAYRAYNTA MAALINTII 1 LUULYO SOOMAALIDU ISKA
XUREEYEEN GUMEYSIGA: DHULKAADA HOOYAAD HEYBAD KU LEEDAHAY
Ali E. H. Naaleeye, Qaranka editor